समाचार - शेन्ज़ेन TIZE टेक्नोलोजी कं, लि।
कलर बन्द गर्दा पक्कै मात्र सान्त्वना थप्न सक्छ, तर राम्रोसँग फिट भएको, हल्का नायलॉन कलर कुकुरलाई विवाहको औठी वा हेयरब्यान्ड लगाउनु भन्दा बढी असहज हुँदैन; उनीहरूले वास्तवमा ध्यान दिएनन्। सामान्यतया कलर हटाइनु पर्छ कि हुँदैन भनेर, यो वास्तवमा कुकुर र बस्ने स्थितिमा निर्भर गर्दछ। म कुकुर सुरक्षित छ भनेर पक्का छु जब व्यक्तिगत रूप मा म कलर को दूर ले, र यदि उनी विश्वसनीय छैन वा एक अज्ञात ठाउँमा छ भने उसलाई एक लगाउन लगाउन।
के इलेक्ट्रिक कुकुरका बारहरू वास्तवमै काम गर्छन्?
धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि एक अदृश्य भूमिगत वायरलेस इलेक्ट्रिक बार आफ्नो कुकुरलाई उनीहरूको आँगनमा राख्नको लागि उत्तम तरिका हो। यद्यपि, ती प्रभावकारी छैनन् जति तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ। तथ्या .्कले सुझाव दिन्छ कि अदृश्य वायरलेस इलेक्ट्रिक बाड़हरू मात्र करिब 70०% प्रभावी छन्।
इलेक्ट्रोनिक कुकुर प्रशिक्षण कलर कसरी प्रयोग गर्ने?
इलेक्ट्रिक डग कलर प्रयोग गर्दा सुरक्षा सर्वोपरि छ। विज्ञहरू सहमत छन् कि ई-कलरहरू सही रूपमा प्रयोग हुँदा सुरक्षित हुन्छन्। जब लापरवाही रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तिनीहरू प्रभावहीन हुन सक्छन् र तपाईंको कुकुरलाई अलमल्ल वा डराउँदछन्।
बधाई छ !! TIZE लाई BSCI रिपोर्ट अप्रिल, २०२० मा मिल्यो
अडिटि Company कम्पनी इन्टर्टेकले हाम्रो कारखानामा अप्रिल to देखि अप्रिल 8 सम्म निरीक्षण गरेका छन् र हामी BSCI रिपोर्ट प्राप्त गर्न सफल हुन्छौं।
पिल्लाको लागि कुन आकारको कलर?
एक राम्रो फिटिंग पालतू पिल्ला कलर छनौट को केहि कारकहरु मा निर्भर गर्दछ, जब सम्म तपाइँको घरपालुवा जनावर संग तैयार हुन्छ कति फर हटाउन सकिन्छ।